Hiatrika fampivondronana voalohany ao Mahajanga ny ekipam-pirenena Malagasy ny Beach Soccer. Hanomboka rahampitso alatsinainy 14 desambra izany, ary hitohy hatramin'ny 19 desambra 2020 izao. Ho fanomanana ny fandraisana anjara amin'ny fifanintsanana ny fiadiana ny ho tompodakan'i Afrika CAN Beach Soccer Sénégal - Mai 2021 ity fampivondronana ity.
Hotanterahina ny 17 ka hatramin’ny 20 Desambra 2020 ny lalao afrikana iadiana ny tompondakan’i Afrika eo amin’ny taranja Judo, ka eto Madagasikara no handraisana izany, araka ny fampahafantarana nentin’ny minisitry ny tanora sy ny fanatanjahantena, Tinoka Roberto. Nankatoavin’ny Filankevitry ny Minisitra ny alarobia 25 novambra 2020 izany, ary napetraka mazava ireo fepetra rehetra ara-pahasalamana tsy maintsy harahana, toy ny fanaovana ny fitsirihana ara-pahasalamana, sy ny fanaovana Test PCR, mialoha ny hidirana eto Madagasikara sy hanaovana ny fifaninana. Fandrindrana ny fitaterana ireo atleta avy any Afrika ho tonga eto Madagasikara, fanaovana ny fifanintsanana tsy azo hatrehin’ny daholobe, fijanonana any amin’ny toerana hitobian’ireo mpanao fanatanjahantena rehefa tsy mandray anjara amin’ny fifaninana izy ireo, fametrahana arovava orona rehefa mivezivezy ivelan’ny toerana hifaninanana.
1 noho 1, io no isa nisarahan’ny Barea an’i Madagasikara sy ny Elefantan’i Côte d’Ivoire, nandritra ny lalao miverina natao tao amin’ny Kianja Barikadimy Toamasina androany tolakandro. Ny Ivoariana no nahatafiditra baolina voalohany teo amin’ny minitra faha-15, taorian’ny penalty nodakan’i Franck Kessié, izay isa tokana nentin’ny ekipa roa tonta niala sasatra. Nosahalain’ny Barea tamin’ny alalan’i Ibrahim Amada, kapiteny, tamin’ny daka mandrivorivo avy any amin’ny 30m, teo amin’ny minitra faha-51, ary io isa sahala 1 noho 1 io no nisarahan’ny roa tonta. Sambany teo amin’ny tantaran’ny lalao nifanandrinan’ny ekipam-pirenena malagasy sy ivoariana no ady sahala, fa saika nibata fandresena hatrany i Côte d’Ivoire. Samy manana isa 7 mitovy i Côte d’Ivoire sy Madagasikara taorian’ny andro fahaefatra ny lalao ao amin’ny vondrona K misy antsika. Nandresy 3 noho 0 an’i Niger i Ethiopie androany, lalao natao tany Ethiopie ary mametraka an’ity firenena ity eo amin’ny laharana fahatelo vonjimaika, manana isa 6, ao amin’ity vondrona K ity.
mardi, 17 novembre 2020 07:45
Kitra – Fifanintsanana CAN 2021 : Anio ny lalao miverina Barea # Elefanta Côte d’Ivoire
Ora sisa andrasana dia raikitra ny lalao miverina hifanandrinan’ny Barea an’i Madagasikara amin’ny Elefanta Côte d’Ivoire. Lalao izay hotanterahina ao amin’ny Stadium Barikadimy – Toamasina, anio amin’ny 4ora tolakandro ora eto Madagasikara. Ny taona 1977 no vita ny Stadium Barikadimy. Ny taona 2004 no nisy lalao iraisam-pirenena farany tao amin’ity kianja ity.
Nodisoin’i Nicolas Dupuis, mpanazatra ny ekipam-pirenena malagasy amin’ny baolina kitra, ny resaka niely tamin’ny facebook fa voan’ny tsimokaretina Covid-19 i Zotsara, iray amin’ireo mpilalao 23 mandrafitra ny delegasiona malagasy miatrika ny lalao mandroso sy miverina amin’i Côte d’Ivoire. « Tsy araka ny feo mihely mahakasika an'i Zotsara, izay ao anatin'ny delegasiona tonga eto Toamasina, izay nolazaina fa hoe : « positif » dia voamarina tamin'ny fitiliana natao izao maraina izao fa « négatif » izy, ary ho anisan'ireo mpilalao hiatrika ny Côte d'Ivoire amin'ny talata izao. Ny staff rehetra koa dia tsy misy mitondra ny otrikaretina Covid-19 », hoy i Nicolas Dupuis.
Tonga io tolakandro io teto Madagasikara, ary samy efa ao Toamasina, toerana hanatanterahana ny lalao miverina hatao amin’ny kianja Barikadimy, ny talata 17 novambra 2020 ny Barea an’i Madagasikara sy ny Elefantan’i Côte d’Ivoire. Tonga mialoha ny Ivoariana, ary naneho fa tsy hitsangatsangana no ahatongavany eto Madagasikara fa mbola haka isa telo. Vonona hanarina ny lesoka sy handrombaka fandresena ihany koa ny Barea. Nanomana fitsenana manokana azy ireo hatreny Ambalamanasa, ka hatrao amin’ny Hôtel Calypso hitoeran’ny ekipam-pirenena malagasy, ny vahoakan’i Toamasina tamin’ny fahatongavan’izy ireo io tolakandro io.